December 2018 - Page 3 of 5 - Puntland Mirror Believable Media Website
[ June 8, 2021 ] TPEC oo sheegtay in ay soo gunaanaday diiwaangelinta codbixiyeyaasha	Somalia
[ June 8, 2021 ] TPEC says voter registration of early municipal elections concluded	English News
[ June 7, 2021 ] Dhismaha shan waddo oo laami ah oo ka bilaabmatay Garoowe	Puntland
[ May 27, 2021 ] Hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya oo kala saxiixday heshiis-war-murtiyeed	Somalia
[ May 22, 2021 ] Hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya oo dib u bilaabay wadahadalada doorashada	Somalia
Isimada Puntland oo kulan ku yeeshay Garoowe
December 20, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Isimada dhaqanka Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah shir toos ah ku yeeshay magaalada Garoowe, iyaga oo isku raacay in ay joogteeyaan wadatashiga ilaa doorashada. Intii uu kulanku socday, isimada ayaa sameystay guddi […]
Laftagareen oo loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed
December 19, 2018 Puntland Mirror 0
Baydhabo-(Puntland Mirror) Cabdulcasiis Maxamed Xasan oo loo yaqaan Laftagareen ayaa loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxa uu helay 101 cod intii lagu guda jiray wareegii kowaad ee doorashada oo ka dhacday […]
Wasiirkii Arrimaha Gudaha Puntland oo iscasilay
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirkii Arrimaha Gudaha Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi oo loo yaqaan Timacade ayaa maanta oo Arbaco ah iscasilay. Shir saxaafadeed uu ku qabtay magaalada Garoowe ayaa Timacade ku sheegay in arrimo isaga u gaar […]
Cabdiweli oo iclaamiyay in uu markale u tartamayo madaxweynaha Puntland
December 18, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Cabdiweli Maxamed Cali, madaxweynaha xilka haya ee Puntland, ayaa ku dhawaaqay maanta oo Talaado ah in uu mar labaad u tartamayo doorashada madaxweynaha. Mr. Cabdiweli, oo si weyn loogu yaqaan Gaas ayaa ku […]
Abdiweli announces he is running again for Puntland president
Garowe-(Puntland Mirror) Abdiweli Mohamed Ali, the incumbent President of Puntland, announced Tuesday that he would run again for Presidential election. Mr. Abdiweli, popularly known as Gaas made the announcement in a ceremony held in Garowe, […]
Mareykanka oo sheegay in ay duqeymo ka dhacay Soomaaliya ku dileen 62 maleeshiyo Al-Shabaab ah
December 17, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa maanta oo Isniin ah sheegay in ay 62 maleeshiyo ah ku dileen lix duqeymood oo Sabtidii iyo Axadii ka dhacay deegaanka Gandarshe oo kuyaala gobolka Banaadir. Taliska Mareykanka ee Afrika […]
The U.S. military said on Monday it had killed 62 militants in six air strikes on Saturday and Sunday in the vicinity of Gandarsh in Somalia’s south-central Banaadir province. The military’s Africa Command (Africom) said […]
ISIS iyo Al-Shabaab oo ku dagaalamay deegaan u dhow magaalo xeebeedka Qandala
Garoowe-(Puntand Mirror) Maleeshiyooyinka ISIS iyo Al-Shabaab ayaa ku dagaalamay gudaha Puntland, sida ay ku warantay warbaahinta ISIS ee Amaq. Dagaalka ayaa Sabtidii ka dhacay deegaanka Bir Miirali oo u dhow magaalo xeebeedka Qandala ee gobolka […]
Howlgal amniga lagu xoojinayo oo ka bilaabmay magaalada Boosaaso
December 16, 2018 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso ayaa bilaabay howlgal lagu xoojinayo amniga, xilli magaalada ay ka dhaceen dilal qorsheysan. Guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays oo loo yaqaan Dhedo oo maanta oo […]
Sideed dagaalyahan oo Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqeyn Mareykanku uu ka fuliyay Shabeellaha Hoose
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn ka dhacday Soomaaliya ay ku dileen sideed dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Duqeynta ayaa Sabtidii ka dhacaday deegaanka Gendershe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ma jirin wax dad […]
Dhismaha shan waddo oo laami ah oo ka bilaabmatay Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda hoose ee Garoowe ayaa maanta oo Isniin ah bilowday dhismaha shan waddo oo laami ah oo uu dhagax dhigay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Waddooyinka oo dhammaantood kuyaala gudaha magaalada ayaa kala; [...]
Hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya oo kala saxiixday heshiis-war-murtiyeed
Muqdisho-(Puntland Mirror) Hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan xalinta ismari-waagii ka taagnaa doorashada. Kadib dhowr maalmood oo wadahadalo Muqdisho uga socday Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynayaasha Dowladda Xubnaha [...]
Hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya oo dib u bilaabay wadahadalada doorashada
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kulan ku saabsan doorashada oo u dhaxeeya Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka ayaa maanta oo Sabti ah ka furmay caasimada Muqdisho. Kulankan oo sii socon doona ayaa [...]
Madaxweynaha dowladda Puntland oo ka qaybgalay Shirka Madasha sare ee TANA oo ka dhacay Itoobiya
Bahir Dahir-(Puntland Mirror) Shirka Madasha sare ee TANA ee ammaanka Afrika ayaa ka furmay maanta oo Sabti ah magaalada Bahir Dahir ee dalka Itoobiya. Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa kamid ah marti sharafka [...]
Ugu yaraan afar qof oo ku dhimatay shilal baabuur oo ka dhacay wadada u dhaxaysa Garoowe iyo Boosaaso
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen shilal baabuur oo ka dhacay wadada laamiga ah ee u dhaxaysa magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso. Shilalka ayaa dhacay gelinkii dambe [...]
Ciidamada amaanka dowlada federaalka Soomaaliya oo xiray labo nin oo Al-Shabaab looga shaki qabo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada amaanka dowlada federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah xiray labo nin oo looga shaki qabo kooxda Al-Shabaab kadib markii ciidamada ay howlgal ku qaadeen degmada Dharkeynlay ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka wasaarada [...]